Summer Style လက်တိုအတိုအင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီတိုများကိုအခမဲ့ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်ကင်းစွာဝယ်ပါ။ | WoopShop®
$17.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $21.99
Kid Size ကို 3T 4T5672T
အရောင် အဖြူ TZ16126 အစိမ်းရောင် TZ16127
3T / အဖြူရောင် TZ16126 4T / အဖြူရောင် TZ161265/ အဖြူရောင် TZ161266/ အဖြူရောင် TZ161267/ အဖြူရောင် TZ16126 2T / အဖြူရောင် TZ16126 3T / အစိမ်းရောင် TZ16127 4T / အစိမ်းရောင် TZ161275/ အစိမ်းရောင် TZ161276/ အစိမ်းရောင် TZ161277/ အစိမ်းရောင် TZ16127 2T / အစိမ်းရောင် TZ16127
နွေရာသီစတိုင်လက်တိုယောက်ျားလေးများရှပ်အင်္ကျီများနှင့်ဘောင်းဘီတိုများ - 3T / white TZ16126 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: ဝါဂွမ်း, Lycra
ယူနစ်: စင်တီမီတာ အရွယ် ကုတ်အင်္ကျီအရှည် တွေဆီကနေ *2အင်္ကျီလက် ဘောင်းဘီအရှည် အသက်အရွယ်ကိုရွေးပါ
1 စင်တီမီတာ (စင်တီမီတာ) ≈0.39လက်မ (၌)
မှတ်ချက်: လက်စွဲစာအုပ်တိုင်းတာခြင်း, 2-3 စင်တီမီတာအမှားလည်းမရှိကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောမော်နီတာနှင့်အလင်းအိမ်မှနည်းနည်းအရောင်ခြားနားချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
суперКачество! Посылкапришлабыстро, доНижнегоНовгорода။
Piękny komplet polecam zamówiłam 10.05 ။ Dostałam 24.05 ။ Rozmiar 130 pasuje idealnie စင်တီမီတာchłopcaဏwysokości 1m.07 na
Заказала 03.04 23.04 получила။ Качествопонравилось။ Быстраядоставка !!!